पुरुष लिंगसँग जोडिएका अनौठा पाँच जानकारी – Everest Dainik – News from Nepal
पुरुष लिंगसँग जोडिएका अनौठा पाँच जानकारी
लिंग मानव शरीरको महत्वपूर्ण एक अंग हो । र यसको महत्व पनि अहम छ । र मानुहोस्की यो तपाईलाई सबैभन्दा प्रीय पनि लागछ छ । त्यसका बावजूद पनि यस्को र योसँग जोडिएका धेरै जानकारीहरु छन तर कैयौं कुरा तपाइृलाई थाहै छैन । त्यसैले आज यो सानो नवाबका बारेमा जानुहोस्
भारतीय पुरुषहरुको लिंगको औसत लम्बाइ (उत्तजेजित अवस्थामा) ५.५७ इंच हुन्छ । तर अपवादका रुपमा भने उत्तजेजित लिंगको आकार १३.५ सम्म भएको पाइएको छ । एक सर्वेका अनुसार ५२ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो भइरहेको लिंग भन्दा लामो र ३२ प्रतिशत पुरुषले भइरहेको भन्दा केही मोटो लिंग चाहाना राखेको पाइएको छ ।
धूमपानले तपाईको स्वास्थ्यका साथै लिंगको ‘आकार’मा पनि असर गर्ने बताइएको छ । धूमपान गर्नेको व्यक्तिको लिंगको आकार ६ सेन्टीमिटरले कम हुने अध्ययनले बताएको छ । त्यतिमात्रै होइन हदभन्दा धेरै धूमपान र ड्रिंकिंगले यौनउत्तेजना कम गरिदिन्छ । त्यसकारण तपाईको भलाइका लागि मात्रै नभएर तपाईको छोटे राजाका लागि भएपनि धूमपान सम्भव भएसम्म त्यागी दिनुस् सम्भव भएन भने कम गर्नुस् ।
सृष्टिकर्ताले पनि यस कुराको हकमा पुरुषलाई महिलाको तुलनामा अन्याय गरेको छ । तपाईलाई थाहा छ पुरुषको उत्तेजना केबल ६ सेकेन्डसम्म मात्रै हुन्छ जवकी महिलाको १३ सेकेन्डसम्म रहन्छ ।
लिंगको आकार किन यस्तो
कहिल्यै सोच्नु भएको छ तपाईको लिंगको अगाडिको भाग किन यस्तो छ भनेर ? किन यो छाता जस्तो देखिन्छ ? तपाई त्यसको बारेमा थापा पाएपछि चकित पर्नु हुन्छ । त्यसको प्रमुख कारण यो हो की सेक्सका दौरान तपाईको सेक्स पार्टनरको योनीबाट शुक्रकीट बाहिर आउन नपाओस् । तपाईको लिंगको छाताआकारले त्यो रोक्ने काम गर्दछ । महिलाहरुको पाठेयघरमा धेरैदिनसम्म शुक्रकीट जीवित रहन सक्ने भएकाले यस्तो गर्नु परेको ,।
लिंगको कम्मरसँग बलियो सम्बन्ध
स्पाइनल कर्ड (मेरुढण्ड) का तीन भागले तपाईको सेक्सजीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । तपाईका कल्पनाहरुलाई स्पाइनल कर्डले नै मस्तिष्कसम्म पुर्याउँछ र लिंग उत्तेजित हुन्छ । लिंगमा तरल पदार्थ आउनु र त्यसको प्रतिक्रियालाईलाई यथावत राख्नका लागि सन्देश दिमागसम्म पुर्याउने काम पनि स्पाइन कर्डले नै गर्दछ । वीर्यसखलित हुने क्रियालाई पनि स्पाइनल कर्डले नै नियउन्त्रत गर्दछ । त्यसैले स्पाइनल कर्ड शरीरको मात्रै नभएर सेक्सजस्ीवनको पनि ब्याकबोन नै हो।
मिठो र सुन्धीत वासानाले तपाईलाई सेक्सका दौरान सक्रियता र उत्तेजना बढाउन मद्दत गर्दछ । लम्बेडरको सुगन्धले त तपाईको सेक्स उत्तेजना बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउँछ । अब त तपाईलाई सम्झना भयो होला किन सेक्स पार्टनर आउनु भन्दा पहिला नै कोठमा सगन्धीत र फरक बासना आउने मैनबत्ती (अरोमैटिक कैंडल) बल्न उत्साहित हुनुहन्छ ?
ट्रम्पले सचिनलाई ‘सूचिन’उच्चारण गरेपछि…
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिबारे सरकारले जारी गर्‍यो श्वेतपत्र (पूर्णपाठसहित)
अछाममा जीप दुर्घटनाः एकको मृत्यु, १३ घाइते
भोलि विप्लव समूहको शैक्षिक हडताल (विज्ञप्तीसहित)
पत्ता लाग्यो कोराना भाइरसविरुद्धको ‘भ्याक्सिन’
विश्व–११ विरुद्धको सिरिजमा सन्दीप पनि अटाए एसिया ११ को टिममा
इस्टर्न रिजन कपका सबै खेल ‘लाइभ’ हेर्न पाइने